यसरी हुन्छ बैंकबाट सेयर कारोबार | NewsKarobar
गृहपृष्ठ यसरी हुन्छ बैंकबाट सेयर कारोबार
जब बैंकलाई सेयर ब्रोकरको काम गर्ने अनुमति दिनुपर्ने कुराहरु आए र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकले सेयर ब्रोकरको काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो, मेरो म्यासेज बक्स लगानीकर्ताका कयौं जिज्ञासाहरुले भरियो ।
कसरी गरिन्छ बैंकमार्फत सेयरको कारोबार ?
के अहिले ब्रोकर कहाँ भएजसरी नै बैंकका सबै शाखामा यस्तै हल बन्नेछन् अनि लगानीकर्ता गएर चिया खाँदै सेयरको मूल्य घटबढ डिस्प्ले हेर्नेछन् ?
के बैंकले हरेक शाखाबाट सेयर किनबेच गरिदिन्छ ?
के बैंकले अब ऋण दिन छाडेर सेयर कारोबार गर्न सुरु गर्छ ?
के बैंकले हाम्रो बचत लगेर सेयर किन्छ ?
बैंकले अलग्गै सहायक कम्पनी खोलेर सेयर ब्रोकरको काम गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो सहायक कम्पनी काठमाडौंमा खुल्ने होला । अनि कसरी देशभरका लगानीकर्ताले बैंकमार्फत सेयर किनबेच गर्न सक्छन् ?
यस्ता अनेकौं जिज्ञासा लगानीकर्ताले राखेका छन् । अझै जिज्ञासाहरु आई नै रहेका छन् । मलाइ आशा छ, यो लेखले सबैको जिज्ञासा मेटाउनेछ । नमेटिए म्यासेज बक्समा पुनः स्वागत गर्दै जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्नेछु ।
सेयर ब्रोकरको काम कानुनतः बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि बैंकको आफ्नै सहायक कम्पनी भएकाले सजिलोका लागि बैंकले सेयर ब्रोकरको काम गर्ने भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ । यसैलाई आधार मानेर कतिपयले बैंकले सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स लिन नै नपाउने व्यवस्था छ कसरी बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स लिएर सेयर कारोबार गर्न सक्छ भन्ने तर्क गर्ने गरेको पनि सुन्न पाइन्छ । यस्ता कुनै तर्क नभई कुतर्कमात्र हुन् ।
कारोबार खाता र डिम्याट खाता
सेयर कारोबार गर्नका लागि लगानीकर्तासँग तीनवटा खाता हुन आवश्यक छ । बैंक खाता, डिम्याट खाता र सेयर कारोबार खाता । देशका प्रायः सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगिसकेकाले लगानीकर्तालाई बैंक खाता र डिम्याट खाता खोल्न अब कुनै समस्या छैन । प्रायः सबै बैंकका शाखाले डिम्याट खाता पनि खोलिदिने गरेका छन् । डिम्याट खाता खोलेसँगै लगानीकर्ताले ‘मेरो सेयर‘को अनलाइन लगइनका लागि युजर नेम र पासवर्ड लिएर डिम्याट खातामा भएको सेयर, पोर्टफोलियोको कुल बजार मूल्य हेर्न तथा प्राथमिक निष्कासन र हकप्रद सेयरका लागि आवेदन दिन पनि सक्छन् । बैंकले दिने यहि सुविधाका कारण देशभरका लगानीकर्ताले प्राथमिक सेयर भर्न अवसर पाएका छन् ।
अबको प्रमुख समस्या भनेको सेयर कारोबार खाताको हो । सेयर कारोबार खाता बैंकले अहिले नै खोल्न सक्दैनन् किनकि यो ब्रोकर लाइसेन्स लिएका संस्थाले मात्र खोल्न सक्छन् । अहिले कुनै पनि बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स लिइसकेका छैनन् । यो खाता नखोली दोस्रो बजारबाट सेयर बेच्न पनि पाइँदैन, किन्न पनि पाइँदैन ।
तर, बैंकले सेयर ब्रोकर लाइसेन्स लिइसकेपछि देशभरका शाखाबाट सेयर कारोबार खाता सहजै खोल्न सकिन्छ । त्यसपछि दोस्रो बजारबाट सेयर किन्न सकिन्छ । भएको बेच्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि बैंकका सबै शाखा ब्रोकर लाइसेन्स लिएको सहायक कम्पनीसँग प्राविधिक रुपमा जोडिनेछन् । मानौं तपाईं इलाम जिल्लामा हुनुहुन्छ । सेयर किनबेच गर्नका लागि तपाईं कारोबार खाता खोल्न चाहनुहुन्छ । तपाईं नजिकै भएको बैंकमा जानुहुन्छ र बैंकका कर्मचारीलाई सेयर कारोबार खाता खोलिदिनका लागि अनुरोध गर्नुहुन्छ । बैंक कर्मचारीले आवश्यक कागजातसहित तपाईंले भरेको फाराम बैंकको सहायक कम्पनीमा विद्युतीय माध्यमबाट पठाउनेछन् ।
सहायक कम्पनीले तपाईंको कारोबार खाता खोलेर त्यसको जानकारी इमेल वा एसएमएसमार्फत दिनेछ । वा बैंकको शाखाले त्यहीबाट सहायक कम्पनीको सिस्टममार्फत तत्काल सेयर कारोबार खाता खोलिदिनेछ । यसैगरी, सोही शाखाले डिम्याट खाता र सेयरको अनलाइन कारोबार खाता पनि खोलिदिनसक्छ । यी सबै काम बैंकको शाखामा बैंक खाता खोल्न बसेका कर्मचारी (रिसेप्सनिस्ट)ले गर्नेछन्, जसका लागि अन्य कुनै हल वा भौतिक पूर्वाधार आवश्यक पर्ने छैन ।
बैंकमार्फत सेयर किनबेच प्रक्रिया
सेयर कारोबारका बारेमा सर्वसाधारणमा रहेको अर्को अन्योल बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स लिइसकेपछि हरेक शाखामा सेयर कारोबारका लागि अलग्गै हल र सिस्टम हुन्छ ? के बैंक शाखाका कर्मचारीले त्यहीँबाट सेयर किनबेच गरिदिन्छन् ? मानौं, तपाईंले इलाम जिल्लामा नजिकैको बैंकको शाखामा सेयर कारोबार खाता खोल्नुभयो भने सेयर किनबेच गर्नका लागि तपाईंसँग तीनवटा विकल्प हुनेछन् । पहिलो विकल्प, अनलाइन कारोबारको युजर नेम र पासवर्ड लिएको तथा सबै जानकारी भएको भए आफैं किनबेच गर्ने । दोस्रो, अनलाइन कारोबारको लगइन लिएको छैन वा इन्टरनेटको पहुँच छैन वा कम्प्युटरको ज्ञान छैन भने बैंकको शाखामा गएर खरिद बिक्रीको आदेश दिने । बैंकका कर्मचारीले उक्त आदेश सेयर कारोबार गर्ने सहायक कम्पनीमा विद्युतीय माध्यमबाट तत्काल पठाइदिन्छन् र सहायक कम्पनीले आदेशअनुसारको सेयर किनबेच गरिदिन्छ । तेस्रो विकल्प, तपाईंले बैंकको सहायक कम्पनीमा सिधै फोन गरेर सेयर खरिद बिक्री आदेश टिपाउन सक्नु हुन्छ वा इमेलमार्फत पनि आदेश दिन सक्नुहुन्छ। फोनबाट आदेश दिए सहायक कम्पनीले तपाईंको नाम, बाबु बाजेको नाम, फोन, इमेल सोधेर आदेश दिने सही व्यक्ति हो भन्ने प्रमाणित गर्नेछ । दिएको आदेशअनुसार सेयर किने बैंकले तपाईंको खाताबाट पैसा तान्नेछ वा तपाईंले पहिल्यै अनुमानित पैसा बुझाइसकेको हुनुहुनेछ । बिक्री गरेको भए शुल्क कटाएर बाँकी पैसा तपाईंको खातामा जम्मा गरिदिनेछ, सेयर बेचेको पैसा माग्न पुनः बैंकमा पुगिरहनु पर्दैन ।
सेयर किनबेचको आदेश दिन खाता खोलेको शाखामै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन, उक्त बैंकको जुनसुकै शाखामा गएर पनि आदेश दिन सक्नुहुनेछ । यसमा एनि ब्रान्च बैंकिङ सुविधा जस्तै ‘एनी ब्रान्च खरिद बिक्री आदेश सुविधा’ हुनेछ । बैंकका हरेक शाखामा सेयर किनबेच भने हुँदैन । र, त्यो हुनुपर्छ भन्ने छैन । अहिले बजारमा यतिका धेरै बैंकका शाखाले कारोबार लगइन कसरी पाउन सक्छन् ? नेप्सेको क्षमता नै छैन भन्ने जस्ता तर्क पनि गर्ने गरिएको छ । यी सबै नियामकलाई तर्साएर आफ्नो व्यवसायको सुरक्षा गर्न खोज्नेहरुको चालमात्र हो ।
बैंकले सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स लिएर गर्ने काम भनेको उसले गरिरहेको व्यवसाय जस्तैः बैंकिङ व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ, डिम्याट खाता खोल्ने जस्तै एउटा नयाँ थप व्यवसाय हो । यसको अर्थ, बैंक निक्षेप लिने र ऋण दिने व्यवसाय छाडेर सेयर किनबेचको व्यवसायमा मात्र केन्द्रित हुने भन्ने हुँदैन । वाणिज्य बैंकले वित्तीय क्षेत्रका सयौं सेवा दिनसक्ने भएकाले नै यिनलाई वित्तीय सेवाको सुपर मार्केटका रुपमा लिइन्छ ।
अनलाइन र बैंकका शाखामार्फत सेयर कारोबार
अनलाइन कारोबार सुरु भएपछि बैंकलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स किन चाहियो ? लगानीकर्ताले अनलाइनमार्फत आफैं सेयर किनबेच गर्न सकिहाल्छन् नि ? भन्ने प्रश्न पनि बारम्बार सुनिन्छन् ।
अनलाइन कारोबार लगानीकर्ताका लागि थप सुविधा हो बाध्यता होइन । अनलाइनले मात्र उपत्यकाबाहिर वा भित्रकै लगानीकर्ताले व्यहोरिरहेका सबै समस्याको समाधान गर्दैन । अनलाइन कारोबार सुरु भएसँगै लगानीकर्ताले आफैं सेयर किनबेच गर्न सक्छन् तर उनीहरुलाई बाध्यता छैन वा सबैले गर्न सक्ने भन्ने पनि हुँदैन । किनकि (१) सबै स्थानबाट ब्रोकरकहाँ सेयर कारोबार खाता खोल्न सक्ने अवस्था छैन, जुन खाता नखोली सेयर किनबेच सम्भव छैन । (२) सबै स्थानमा इन्टरनेटको सहज पहुँच छैन । (३) सबै लगानीकर्तामा कारोबार कसरी गरिन्छ भन्ने ज्ञान हुँदैन, प्राथमिक बजारमा सेयर भरेका भरमा दोस्रो बजार र आफैं कारोबार गर्ने ज्ञान हुन्छ भन्ने हुँदैन । (४) सबै लगानीकर्तामा अनलाइन सेयर कारोबार गर्ने समय हुँदैन, जस्तो १० बजेबाट ५ बजे काम गर्न कार्यालय जानुपर्छ । उक्त समयमा कम्प्युटर खोलेर सेयर कारोबार गरेर बस्न सकिँदैन । यसैले पनि ब्रोकरलाई आदेश दिएर कारोबार गर्नुपर्छ र यसरी कारोबार गर्नु उनीहरुका लागि बाध्यता जस्तै हुन्छ ।
जतिसुकै विकसित देशमा पनि सबै मानिसले आफैं सेयर कारोबार गर्दैनन्, धेरैले ब्रोकरलाई आदेश दिएरै सेयर केनबेच गरिरहेका हुन्छन् किनकि सबैमा कारोबार प्रक्रिया र सेयरको ज्ञान हुँदैन । यसैले अनलाइन कारोबार सुरु भएसँगै देशका कुना-कुनामा सेयर कारोबार सेवा पुर्याउन बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स आवश्यक छैन भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिँदैन । यो भनेको पहुँच र सेवाको विस्तार हो । लगानी अवसरमा सबैको पहुँच हो ।
पछिल्लाे - एनआईसी एशियाको नयाँ शाखा सिरहाको गोलबजारमा
अघिल्लाे - बसन्तपुरमा ठड्याइयो चिर, उपत्यकामा होली सुरु (फोटो फिचर)